Maitiro ekudzikisira kubva iOS 9.1 kuenda iOS 9.0.2 | IPhone nhau
Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 9.1 kuenda kuIOS 9.0.2
Senguva dzose, panoburitswa vhezheni itsva yeIOS, inogadzira vateveri vayo nevanozvidza. IOS vhezheni 9.1 yakasvika pamidziyo yedu na19: 00 manheru nezuro. Izvo zvakare zvinogona kunge iwe wakarodha pasi nekusaziva uye kuisa iOS 9.1 uye iwe unonzwa kunzwa kuti chako kifaa chashata mukuita. Iwe pachako, kana iwe ukaverenga isu nguva dzose wakakwanisa kucherechedza kuti ini ndakanyora chinyorwa chakakomba mandiri ndakanyatsotaura zvakanaka nezve iOS 9.1, asi chishandiso chimwe nechimwe inyika, saka kana iwe waisada iOS 9.1 zvachose nekuda kwechikonzero, kana imwe mhando yebug kana dambudziko uye iwe unofarira kudzokera kuIOS 9.0.2, kana uchingoita Jailbrea, mu iPhone Gadziriso tinokuunzira dzidziso yekuti ungadzoka sei kubva kuIOS 9.1 kuenda kuIOS 9.0.2.
2 Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 9.1 kuenda kuIOS 9.0.2
Iwe hauchakwanise kudzokera kune chero vhezheni pamberi peIOS 9.0.2, sezvo isina kusainwa, saka kurodha pasi vhezheni yapfuura hakuzokuitire chero chinhu.
Tinogona chete kudzikisira kuIOS 9.0.2 panguva pfupi iyo Apple nemaseva ayo ari kuratidza iyi vhezheni, saka kana iwe uri kufunga nezve kurodha pasi iyo vhezheni yeIOS izvozvi kana kumbobvira.
Usakanganwa kuita backup yeiyo iOS chishandiso muICloud kana iTunes, chero yaunoda zvakanyanya kana kuburitsa chivimbo chikuru mauri.
Rangarira kuti izvi zvinotungamira mukurasikirwa kwemabasa ekuchengetedza eimwe neimwe yekuvandudza.
Kuti uzive kana iyo iOS 9.0.2 vhezheni ichiri kusainwa, unogona kuisa IZVI CHIMBONI uye woitarisa.
Dhawunirodha iOS 9.0.2 kubva pane yaunogara uchibva kwese kana kubva ku www.GetiOS.com
Tinodhawunirodha iyo iOS 9.0.2 firmware kubva kunzvimbo dzakambokurudzirwa. Rangarira kurodha pasi rinoenderana neyako kifaa, kuti uone kuti unogona kutarisa tsamba dzinoratidzwa kuseri kwechigadzirwa.
Isa chishandiso muDFU modhi: Kuti uite izvi, batanidza chishandiso ku iTunes on, wozodzima uchinge wakavharirwa. Zvino tumira iyo Bhatani + Simba bhatani rakatsimbirirwa kwemasekondi gumi uye mushure menguva iyoyo yenguva buritsa iro Simba bhatani, asi kwete iro Bhatani repamba, kudzamara mufananidzo weTunes uchiratidzwa paiyo iPhone skrini.
Iye zvino muTunes, kana chishandiso chakabatana uye chikaonekwa, tinya pa "Dzosera iPhone" nekiyi "Alt" yakadzvanywa kana ukashandisa MacOS kana "Shift" kana ukashandisa Windows.
Sarudza iyo .psw faira iwe yawakadhinda uye unomirira kuti idzorere.
Uye voila, iwe uchave uri paIOS 9.0.2, zvirinani kana iyi vhezheni ichinge yasainwa, kuti ugone kuita Jailbreak, pakati pezvimwe zvinhu, iyo yakavharwa muIOS 9.1.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzikisira kubva kuIOS 9.1 kuenda kuIOS 9.0.2
Zvakanaka izvi zvatova sindios!
Kuti uzive kana iyo iOS 9.0.2 vhezheni ichiri kusainwa, unogona kupinda IZVI CHIMBONI uye woiongorora…. kubatana kupi?
Ikoko unogona kudhawunirodha yese iOS yezvinhu zvakasiyana uye woratidza kuti ndeapi achakasainwa https://ipsw.me/
Kusahadzika, pane chero munhu akaedza iOS 9 pane iPad 2?
Izvozvi ndiri paIOS 7 uye ndiri kufunga kukwidziridzwa kuIOS 9 kuti ndikwanise kuwana maapplication matsva kana meseji dzekushandisa zvinogona kuitwa mune ramangwana.
Yangu yazvino kushandisa ndeye kubhurawuza, twitter, tapatalk, youtube, uye vhidhiyo inotamba. Ini ndinotaura pane izvo zvekuita nevamwe.
Pindura ku efrit
José Adrián Mendoza García akadaro
Yup, uye zviri kufamba zvakanaka
Pindura José Adrián Mendoza García
Ini handinga gadzirise iyo ipad 2 kudzamara zvanyatso taurwa kuti iri nani pane ios8. Ndichiri paios 8.1.2 pane ipad mhepo uye handina kugutsikana na9.0.2 kubva pane zvandakaverenga, ndinoshuva dai ndaigona kuyedza 7.1.2. Dambudziko nderekuti vanokusiya waraswa nemaapplication anoda vhezheni itsva dzeOS. Kunze kwekuenda zvirinani ndinoda kukwanisa kupaza jeri, izvo zvakakosha kwandiri.
Ehe, ini ndinodawo kuti irwadziswe sezvo ini ndichishandisa iyo iPad seMediaCenter uye ini ndine XBMC yakaiswa. Ndosaka ndanga ndichikumbira kuvandudza izvozvi kubva pa7 kusvika pa9 nekuti 9.0.2 ine jailbreak, asi 9.1 parizvino vakati kwete.
Asi zvinondishungurudza nekuda kwekuvandudzwa kweapp uye nezvimwe. Kunyangwe iko kushandiswa kwandinoipa iko kwakawanda kwekufamba sezvandakambotaura uye zvine basa kwandiri, asi kana ndiine bhodhi mutambo maapplication akaiswa uye ini ndingadai ndisina matsva ndisinga pfuure mubhokisi reiyo itsva iPad chokwadi.
Daniel ruiz akadaro
Ruregerero kusaziva kwangu, asi zvinorevei kuti iwe unogona kunakirwa zvirinani kana iyi vhezheni ichisainwa? Nhare mbozha yangu (Iphone 6) yakavhiringidzwa neyekuvandudza uye ndinoda kuidzosera kune OS yapfuura.
Pindura kuna Daniel Ruiz
Kana ndikaita backup, panguva yekudzoreredza handizorasikirwe nechinhu kana ndinofanira kudzoreredza mashandisiro?
Miguel, ndinokutendai zvikuru akandibatsira, Yurgen haarasikirwe nechinhu asi maficha akadai semitambo akamirira kusvikira zvese zvadzingwa, iwe unoona iwo ma icon asi kusvika iwo atorwa pasi haugone kuashandisa.
Pindura kuna Hevert
PANDinoita izvi, zvinondiudza kuti hazvisi kuenderana, uye kuti ndakazvitora kubva pasage imwe chete ..
Iyo inondiudza chinhu chimwe chete: kuti haina kuenderana ini ndaive muios 8.4 uye ini ndakaenda kuiyo ios 9.1 uye pandakada kudzokera kuIos 9.0.2 (iyo yandaisambove nayo pane yangu iphone) inondiudza kuti ndizvo hazvipindirani. uye ikozvino hakuna jailbreak kana na. zvakashata.
Pindura kuna ABDEL
Manheru akanaka, ndine dambudziko ndinotora iro faira kubva papeji raunoratidza, asi hapana faira rine ipsw fomati mukati, pane munhu angandibatsira? kutenda mberi.
Iwe wakagadzirisa sei dambudziko rako? Ivan, chinhu chimwe chete chinoita kwandiri
Ini ndaive paios 8.4 uye ini ndakaenda kune ios 9.1 uye ndichida kudzokera kune ios 9.0.2 (iyo yandisina kumbove nayo pane yangu iphone) inondiudza kuti haina kuenderana. uye ikozvino hakuna jailbreak kana na. zvakashata.
Zvakaitikawo kwandiri, shamwari, wawana mhinduro here?
Pindura kune jeison
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, chinondiudza kuti hachiwirirane asi chakasainwa ,,, hapana chandiri kunzwisisa ,,, mhinduro ???
Kana ichiti haina kuenderana, imhaka yekuti hausi kurodha pasi ios yakakodzera kune yako terminal
Kwete kwete, ndine iPhone 6 plus uye ini ndotora download ios yake uye ndakazviita kubva pamapeji akasiyana asi hapana.
Izvo zviri kutomboitika kwandiri neangu ipad mini yandakazvimisikidza yakanangana neiyo 9.1 uye kana ndichida kudzokera kuIos 9.0.2 inondiudza kuti haina kuenderana
Iniwo ndinowana iko kukanganisa kwekuti firmware haienderane, uye ndine chokwadi che100% kuti ndinotora iyo ndeyangu iphone uye kuti ndasimbisa kuti iri iphone 5s GSM vhezheni uye ini ndatora iyo firmware uye hapana, Ini ndinowana iyo yakafanana eroor! Pane chero munhu anoziva chero mhinduro, ndeyekuti kubva pandakaisa ios 9.0.2 bhatiri rangu rinogara zvishoma uye ini ndaida kuona kana kuiisa se iphone nyowani yaizogadzirisa kana ini ndisingazogadzirise kune ios 9.1 uye kumirira kuti jailbreak isunungurwe. asi ini handidi kurasikirwa nejeri chokwadi ...
Mhoroi, ndiri paIOS 8 Ini ndinogona kudzoreredza kuna 9.02 nekuisa iyo iPhone muDFU modhi? Kana, apo Apple inomira kusaina iyo yega sarudzo ndeyekudzosera kuIOS 9.1? Ndatenda
Erik hernandez akadaro
Ini ndiri mumamiriro akafanana! nekukanganisa ini ndinogadziridza yangu iPhone kune iOS 9.1 Ndiri kuda kudzikisira asi haindibvumidze, inoratidza kukanganisa, uye ndine chokwadi chekuti kana ndikadzora software yakaratidzwa… ndinoda kudzokera ku9.0.1, mumwe munhu ane chinongedzo chekurodha pasina ini kutarisa kukanganisa? WAZVIITA!!!
Pindura Erik Hernandez
ndine urombo iOS. 9.0.2
Iwe haugone kudzokera kumashure sezvo Apple yamira kusaina iyo vhezheni. Kwaziso. Nguva dzose yeuka kuti, apo Apple inomira kusaina software, hauchakwanise kudzoka (kwete nenzira yakajairika)
Ndingaite sei zvekare kuti ndidzokere kuIos 9.0.2, zviri kukurumidza
uchiri kugona kudzikisira kubva pa9.1 kusvika 9.0.2 unogona kundizivisa, ndatenda
zvakanaka, ndaive nezuro muchitoro chemaapuro nekuti screen ye iphone 6 yanga yatyoka.Vakandipa nyowani zvakangofanana. Ndisati ndaita shanduko ndakaita backup muicloud.
Iye zvino ndinobatidza nharembozha nyowani, uye handina kana pikicha imwe pane reel. Kwete izvozvo chete, asi ini ndinotora mifanidzo mitsva uye havaendi kunodzedzereka.
Mafaira ehurukuro dzakasiyana dzeWhatsApp akanyangarikawo. Ini ndinosangana uye kana, semuenzaniso, tanga tine mafaera mazana mashanu, ini ndichine mafaera mazana mashanu, asi ini ndinovhura kuti ndiaone uye machena machena ane grey mubvunzo chiratidzo anoonekwa.
Izvo zvakatoitika kune mumwe munhu?
Unoziva here kundibatsira?
Ndine iyo 9.1 mune yangu 4s mwedzi wapfuura uye zvave zvakaipa kwandiri. inononoka. Saka, ini ndoda kuziva kuti ndeipi yapfuura vhezheni yandinogona kudzokera nhasi? 🙁 uye chii chingave chinongedzo chekuburitsa? Ndokumbirawo, ini ndingafarire chaizvo.
Zvakanaka kuti tsananguro yakanaka uye yakapusa irambe yakaita seiyi
"Tsvaga shamwari" yave kuwanikwa kubva pawebhu iCloud.com
FullFolder9, ratidza mamwe maapplication mumafolda